TOKO 9: REFERENENANA OBJECTS - Geofumadas
TOKO 9: FITSIPIKA NY FANDINIHANA
Na dia efa maro efa nandinika fantsakan-teknika noho ny zavatra isan-karazany ao amin'ny fomba fanao araka ny marina, araka ny sary mahazo pitsiny, dia matetika zavatra vaovao noforonina ary napetraka foana raha oharina amin'ny zavatra Efa voatsoaka. Izany hoe, ireo singa efa misy ato amin'ny sary nataonay dia manome antsika references geometrika ho an'ny zavatra vaovao. Matetika isika no afaka mahita, ohatra, ny manaraka tsipika mivoaka avy ao afovoan'ny faribolana iray, vertex sasany ny marolafy na ny midpoint ny tsipika iray hafa. Noho izany antony izany dia manolotra fitaovana mahery vaika ny Autocad mba ahafahana manisy tsipika ireo teboka ireo mandritra ny famoahana ny baikon-tsolika antsoina hoe Reference to objects.
Reference ny zavatra dia toy izany no fomba iray manan-danja mba hanararaotra ny toetra voafaritra ny zavatra efa voasarika ho amin'ny fanorenana ny zavatra vaovao, satria manompo ny mamantatra sy mampiasa teboka tahaka ny midpoint, ny fihaonan-dalana ny 2 tsipika na tangent ankoatra ny hafa. Tokony koa milaza fa momba ny zavatra dia tandindon 'mangarahara didy, izany hoe, mety azo hampiharina mandritra ny famonoana ny sary baiko.
Fomba haingana hanararaotra ireo andinin-tsoratra samihafa amin'ny zavatra misy, dia ny fampiasana ny bokotra misy ny rindranasa, izay ahafahana mampifanaraka ireo references voafaritra manokana, ary manantitrantitra isika, na dia efa nanomboka baiko an-tsoratra aza isika. Andao hijery fijery ambaratonga voalohany.
Andao hojerentsika ohatra. Hifanitsy ny tsipika izay hifanandrify amin'ny sisin'ny andrin-tsokona iray ary ny iray amin'ny kilaometatra amin'ny sivifolo amin'ny faribolana iray. Amin'ny ankapobeny dia hamehy ny fehintsoratra momba ireo zavatra ilaina mandritra ny famonoana ny baikon'ny fanoratana.
Ny Reference to objects dia ahafahana manamboatra ny tsipika miaraka amin'ny fahamendrehana tanteraka ary tsy tena manahy momba ny fandrindrana, ny angatra na ny halavan'ny zavatra. Ankehitriny dia eritrereto hoe maniry ny hanambatra ny boribory ho an'ity lahatsoratra ity izay mifanohitra amin'ny faribolan'ny efa misy (connexion metaly amin'ny lafiny iray). Indraindray, bokotra Object Reference dia ahafahantsika mahazo ity foibe ity nefa tsy manondro karazana hafa toy ny kôdeksa kôlétika tanteraka.
Azo jerena eo no ho eo ireo references amin'ny zavatra azo avadika amin'ny bokotra sy ny endriny.
Ho fanampin'ireo teo aloha, manana andinin-teny hafa momba ny zavatra ao amin'ny lisitry ny votoaty isika, raha, mandritra ny baikon'ny sary dia manindry ny lakile "Shift" isika ary avy eo ny bokotra havanana.
Ny toetra mampiavaka ny sasantsasany amin'ireo tsikera izay miseho amin'ity menu ity dia ny tsy fanondroan'izy ireo mafy ny toetran'ireo geometrik'ireo zavatra ireo, fa ny fanitarana na ny fanovana azy ireo. Izany hoe, ny sasany amin'ireo fitaovana ireo dia mamaritra ireo teboka izay tsy misy afa-tsy amin'ny eritreritra sasany. Ohatra, ny fitenenana hoe "Extension", izay hitantsika tamin'ny horonantsary teo aloha dia mampiseho, mazava ho azy, vektor iray izay manondro ny dikany fa hisy tsipika na arc iray raha toa ka betsaka kokoa izy ireo. Ny fanondroana "Fifanarahana fikendrena" dia ahafahana manondro teboka iray izay tsy misy amin'ny habaka telo-dimensional toy ny hitantsika amin'ny lahatsary ihany koa.
Ohatra iray hafa ny fanondroana "Afovoany eo anelanelan'ny teboka 2", izay asehon'ity anarana ity dia manangana ny afovoany eo anelanelan'ny teboka roa, na dia tsy an'ny zavatra rehetra aza izany teboka izany.
Ny tranga fahatelo izay miasa amin'ny làlana iray, dia ny fametrahana teboka izay avy amin'ny geometran'ny zavatra nefa tsy azy ireo, dia ny famerenana "Avy", izay mamela ny famaritana teboka amin'ny elanelana iray avy amin'ny Tanjona iray hafa. Ka io "Object Reference" io koa dia azo ampiasaina miaraka amina referisy hafa, toy ny "End Point".
Tamin'ny dikan-teny teo aloha an'ny Autocad, dia fahita matetika ny fampahavitrihana ny fitaovana "Refa momba ny zavatra" ary mandeha manindry ny bokotra misy tadiavina ao afovoan'ny baiko sary. Io fomba fanao io dia mbola azo atao, na dia ny fisehon'ilay ribara interface tsara aza dia manamaivana ny faritra fanaovana sary ary mampihena ny fampiasana fitaovana. Raha izany, azonao atao ny mampiasa ny bokotra mitete-midina eo amin'ny toeran'ny status, araka ny nasehontsika teo aloha. Na izany aza, Autocad dia manolotra fomba iray ahafahana mamolavola referrera iray na maromaro hampiasaina mandritra ny sary. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manitsy ny fihetsiky ny «Reference to object» isika miaraka amin'ireo soratana mifanentana amin'ny fifanakalozan-dresaka «Taribitsaka mitsivalana».
Raha miaina ato amin'ity fifanakalozan-dresaka ity, ohatra, ny famaritana ny "Endpoint" sy "Centre", dia ireo no ho toetoza izay ho hitantsika ho azy ireo rehefa manomboka manao didy na fanitsiana. Raha amin'io fotoana io dia te-hampiasa referipe iray hafa isika dia mbola afaka mampiasa ny bokotra eo amin'ny laharana toe-javatra na ny lisitry ny toe-javatra misy. Ny tsy fitovian-kevitra dia ny fampirantiana ny toe-javatra misy ihany no manetsika ny fanondroana zavatra efa niriana vetivety, raha toa kosa ny boaty fifampiresahana na ny bokotra momba ny barazy dia mamela azy ireo ho mavitrika amin'ny baiko fanaovana sary manaraka. Na izany aza, tsy mety ny fampahavitrihana ireo lahateny rehetra ao anaty boaty fifanakalozan-dresaka, na dia somary misy singa marobe aza ny sary ataontsika, satria mety ho betsaka ny isan'ireo teboka voamarika fa mety ho very ny fahombiazan'ny filazalazana. Na dia tokony homarihina aza fa rehefa misy teboka marobe momba ireo zavatra mavitrika dia azontsika atao ny mametraka ny manozona ny teboka iray eo amin'ny efijery ary avy eo manindry ny lakile "TAB". Izany dia hanery an'i Autocad handeha haneho ireo andinin-tsoratra izay eo akaikin'ny kankana amin'io fotoana io. Raha ny marina, mety misy ny fotoana izay te-hamongotra ny fitenenana rehetra momba ny zavatra mandeha ho azy, ohatra, dia manana fahalalahana feno miaraka amin'ny kofehy eo amin'ny efijery. Ho an'ireo tranga ireo, azontsika atao ny mampiasa ny fisafidianana "Tsy misy" ao amin'ny menio tontolon-kevitra izay hita miaraka amin'ny bokotra "Shift" ary ny bokotra havian'ny totozy.
Etsy an-danin'izany, hita fa ny Autocad dia manondro amin'ny teboka farany, ohatra, amin'ny fomba hafa amin'ny zavatra tondroin'ny mivaingana ary izany dia manavaka tsara ny afovoany iray. Ny teboka fanondroana tsirairay dia manana marika manokana. Na hiseho na tsia ireo marika ireo, na koa hoe "voasarika" ilay mpanondro, dia voafaritry ny fanamafisana AutoSnap, izay tsy inona fa tsy fanampiana ara-pahitana amin'ny "referensy Object". Mba hampifanarahana ny AutoSnap dia mampiasa ny tabilao "Misintona" amin'ny boaty fifampidinihana "Safidy" izay miseho miaraka amin'ny lisitry ny fiandohan'ny Autocad.
Previous Post«Previous Tables 8.5
Next Post 9.1 .X sy .Otikamanaraka »